မြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၀ ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံကို တတိယအသုတ်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရ — မြန်မာဌာန
MOU စနစ်နဲ့ မဲဆောက်မြို့မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာကြသည့် မြန်မာအလုပ်သားမားများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
Photo: အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး Myanmar Labour Attache Office
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချွန်လွာ (MOU) စနစ်နဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၀ ကျော် မေလ ၁၉ ရက် နေ့က တတိယအကြိမ် ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်ခွင့် ထပ်ရခဲ့ပါတယ်။ MOU စနစ်နဲ့ ဝင်လာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၁ ဦးကို အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဌာနဆိုင်ရာတွေက မဲဆောက်မြို့ နယ်စပ်စခန်းမှာ ကြိုဆိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ တစ်ဖက်ကမ်း မြဝတီ-မဲဆောက် အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားကနေ ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ MOU မြန်မာ အလုပ်သမား ၁၅၁ ဦးထဲက ၉၂ ဦးက Fujikura Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ၊ ၂၉ ဦးက Thai Chin Fu Enterprise Co.,Ltd. ၊ ၃၀ ဦးက Samakee Concrete Product Co.,Ltd. တွေမှာ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မဲဆောက်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာပြည်သားများအရေး ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးက ပြောပါတယ်။
“တတိယအသုတ်အနေနဲ့ MOU ၁၅၁ ဦး ဝင်လာတယ်။ အဲဒီ ၁၅၁ ယောက်ကို ခွဲတာ ၉ ၂ ယောက်တစ်စု၊ ၂၉ ယောက်တစ်စု၊ ၃၀ တစ်စုပေါ့။ One Stop Service နဲ့ အကုန် ပြီးတာပဲ။ အဲအမှတ် ၂ တံတားမှာပဲ အကုန်ပြီးတယ်။ ညနေ ထွက်မယ် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ကို။ အခုချိန်ထိ ၇၃၉ ယောက် ဝင်လာရသေးတယ်ဆိုတာ အလွန် နည်းပါတယ်”
အလုပ်သမားတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းတွေ ကနေ လာကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့တွေဟာ မြန်မာဘက်က အေဂျင်စီကို ကျပ်ငွေ သုံးသိန်း ပေးဆောင်ရသလို ထိုင်းနိုင်ငံဘက် ဝင်ရောက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ၊ နေရာချထားရေး၊ အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် ဘတ်ငွေ ၅၃၉၀ ဘတ်ကနေ ၇၆၀၀ ဘတ်ထိ ကောက်ခံဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ဦးမိုးကြိုးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ဝင်လာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို မြဝတီ မဲဆောက် အမှတ် (၂) ချစ်ကြည်ရေး တံတားမှာပဲ နေထိုင်ခွင့်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ကိုဗစ်ရောဂါ အပါအဝင် ရောဂါ ခြောက်မျိုး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာတွေကို One Stop Service အစီအစဉ်အတိုင်း အပြီးပြုလုပ်ပေးပြီး ကွာရန်တင်း ဝင်စရာမလိုဘဲ လုပ်ငန်းခွင်ကို တိုက်ရိုက် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၀ ရက်၊ ၁၁ ရက်နေ့တွေမှာ MOU မြန်မာအလုပ်သမား ၅၈၈ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့ မှာ ၁၅၁ ဦး ဝင်ရောက် ခဲ့တာကြောင့် အခုဆိုရင် MOU အလုပ်သမားပေါင်း ၇၃၉ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်ဖို့ မြန်မာအပါအဝင် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပေါင်း ၁၄၄,၇၀၉ ဦးကို ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်အကိုင် ဦးစီးဌာနက အလုပ်ခေါ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား တစ်သိန်း တစ်သောင်းကျော် (၁၁၇,၀၂၉ ) အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက အကျဉ်းချခံ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၇၀ ကို တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ ပြန်ပို့